Madoobe Nuunow oo diiday mideynta maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madoobe Nuunow oo diiday mideynta maamulada Koonfur Galbeed Soomaaliya
Baydhabo – Mareeg.com: Madoobe Nuunow Maxamed oo ahaa madaxweynaha maamul gobleedkii 6-da gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa kasoo horjeestay heshiis shalay lagu saxiixay Mqudisho, kaasoo lagu mideeyey maamulkiisii iyo maamulkii kale ee la loolamayey ee 3-da gobol.
Heshiiska shalay Muqdisho lagu saxiixay ayaa dhigayey in labada dhinac wad dhisaan maamul ay ku mideysan yihiin oo ka kooban 3 gobol oo kala ah: Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose.
Madoobe Nuunow ayaa nasiib darro ku tilmaamay heshiiska shalay ka dhacay Muqdisho, wuxuuna ku dooday inuusan jirin qof maamulkiisa heshiiskaas u matalayey.
“18 maalmood ayaan Muqdisho u joognay sidii xal loo heli lahaa, waxaan la kulanay madaxda dowladda oo madaxweynuhu ka mid yahay, waxaan la kulanay beesha caaalamka, hase ahaatee is-fahamkii aan raadineynay waa suurageli waayey, waxaana arrintu ka socon weyday xukuumadda” ayuu yiri Madoobe Nuunow oo u warramay BBC.
Heshiiskii shalay oo ay goob joog ka ahaayeen madaxda dowladda SOomaaliya iyo wakiillada beesha caalamka waxaa qolada sheeganeysay lixda gobol u saxiixay C/fataax Geeseey oo wasiir ka ahaa maamulkaas, halka kooxda 3-da gobol uu saxiixay hogaamiyahooda Maxamed Xaaji C/nuur, iyadoo dowladda Soomaaliya uu u saxiixay Raysul wasaare ku xgeenka ahna wasiirka arrimaha diinta Ridwaan Xirsi.
Madoobe Nuunow ayaa sheegay inuu xilalkii ka qaaday laba wasiir oo maamlkiisa dooddu ka jirtay.
Xubnaha Madoobe uu xilka ka qaaday ayaa kala ahaa: Saxiixihii heshiiska ahaan wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo amniga, C/fataax Ibraahim Maxamed Geeseey iyo wasiirkii dowladaha hoose iyo horumarinta reer miyiga, Shiine Macallin Nuuroow.
Diidamada heshiiskaan uu ku sameeyey Madoobe Nuunow ayaa timid iyadoo shalay wakiilka IGAD, Maxamed Cabdi Afey oo ka hadlay munaasabad ka dhacday xarunta Madaxtooyada Soomaaliya uu shaaca ka qaaday in ay aqoonsanyihiin Maamulka Koonfur Galbeed ee ka kooban Sadaxda gobol ee kala ah Baay , Bakool iyo Shabeelaha Hoose, ayna tilaabo ka qaadayaan ciddii ka hortimaada.
Danjire Afey waxa uu sheegay cidii kasoo horjeesata Maamulka Koonfur Galbeed ee ka kooban sadaxda Gobol in ay u aqoonsan doonaan dad lamid ah Xarakada Al-Shabaab ayna ula dagaalami doonaan sida Al-Shabaab oo kale.
“Madaxweyne farta inoogu fiiq ciddii caqabad ku noqota heshiiskaan, ma aqbali doonno in maanta kadib la is hortaago dowladnimada Soomaalida” ayuu yiri Afey.
Munaasabad lagu shaaciyey heshiiska la dhex dhigay mas’uuliyiinta labada maamul ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa shaly lagu qabtay xarrunta madaxtooyada, iyadoo uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Prof. Jawaari iyo Raysul wasaare Cabdi Weli Sheekh.
Sidoo kale, waxaa heshiiska goobjoog ka ahaa wakiillo ka socday QM, IGAD, Midowga Afrika iyo Midowga Yurub iyo siyaasiyiin ka socday maamullada iska soo horjeeday.
Ex eddict’s veiw on khat ban in